Sajhasabal.com | Homeएमाले महाधिवेशन : क-कसले गर्दैछन् त ‘डेब्यू’?
एमाले महाधिवेशन : क-कसले गर्दैछन् त ‘डेब्यू’?
मंसिर ९, काठमाडौं। नयाँ नेतृत्व छान्न नेकपा एमालेको महाधिवेशन शुक्रवारदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ। एमाले पार्टी र उसका उच्च नेतादेखि कार्यकर्ता कार्यकर्तासम्म त्यसमै व्यस्त छन्। पार्टी विभाजनपछि हुन लागेको एमाले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी कस्तो बन्ला भन्ने चासो र चर्चाको विषय बनेको छ।